Mpiasan’ny fahasalamana any Toamasina : hatramin’ny dokotera sy …profesora tratran’ny pesta | NewsMada
Mpiasan’ny fahasalamana any Toamasina : hatramin’ny dokotera sy …profesora tratran’ny pesta
Par Taratra sur 05/10/2017
Raha nisy fito izy ireo tamin’ny herinandro ambony, tafakatra 13 omaly ireo mpiasan’ny fahalamana any Toamasina tratran’ny pesta ka naiditra hopitaly. Misy amin’ireo ny dokotera,… profesora ary solotenam-panjakana eo anivon’ny prefektiora.
Tonga amin’ny fiteny malagasy hoe “lany fanahy mbola velona ny Malagasy,” manoloana ny firongatry ny aretina pesta amin’ny havokavoka. Fantara izao fa saika naiditra amin’ny hopitaly avokoa hatramin’ ireo mpitsabo. Raha fito izany teo aloha, efa mananika ny 13 izy ireo amin’ izao ary misy profesora. Sahiran-tsaina ny fianakavian’ny marary hoe iza ary no hitsabo. Tsy vitan’ izay, marary ary naiditra hopitaly ihany koa ny filoha mitarika ny vaomieran’ny borigady hiadiana amin’ny pesta sy ho fakan’ny mpanao gazety loharanom-baovao ofisialy. Ity farany no solontenam-panjakana eto anivon’ny prefektioran’ i Toamasina, mitaitaina avokoa ny rehetra satria saika nisy fifandraisana akaiky tamin’ ny solontenam-panjakana eto an-toerana izy amin’ny asa sahaniny.
Ankilany, lasa mitondra mankany amin’ny mety hisian’ny fifampisaraham-bazana eo amin’ny samy fiarahamonina ity resaka pesta ity. Tsy tia mifanatonatona intsony ny olona, tsy mifandray tanana akory aza.
Mitohy kosa, hatramin’ izao, ny fanondrahana ranom-panafody manerana ny sekoly rehetra miankina sy tsy miankina, ataon’ny tompon’ andraikitry ny fanabeazam-pirenena. Mbola tsy tazana kosa ny fanaovana izany eny anivon’ny fokontany izay toerana betsaka olona mifamezivezy indrindra ka mety hitondra tsimokaretina. Hatreto aloha, mbola tsy fantatrra mazava izay mety hiverenan’ny mpianatra an-tsekoly manoloana ny firongatry ny pesta eto Toamasina.